Antsan’ny Fanantenana: hanolotra seho fiderana goavana | NewsMada
Antsan’ny Fanantenana: hanolotra seho fiderana goavana
Herintaona lasa izay, nandrombaka ny laharana voalohany tamin’ny fifaninanan-kira evanjelika, “Mihobia”, nokarakarain’ny fahitalavitra iray eto an-dRenivohitra, ny antoko mpihira Antsan’ny Fanantenana (Afa). Ankehitriny indray, mikarakara antsan-kira fiderana goavana izy ireo. Hotontosaina ny alahady 26 aogositra izao, ao amin’ny fiangonana FJKM Kristy Fanantenana Antohomadinika, izany.
Hanana ny mampiavaka azy ny seho, hiompana amin’ny lohahevitra hoe « Andao hidera fa Malagasy». Araka izany lohahevitra izany, nosafidin’ny antoko mpihira manokana ireo hira fiderana amin’ny gadona malagasy, araka ny fanazavan-dRazafindrazaka Mamy, filoha mpitantana ny Afa. Nambarany koa fa hizara telo ny fotoana amin’io, hosantarina amin’ireo hira rehetra nahafantarana ny Afa hatramin’izay. Handimby izany ny fampisehoan’ireo ankizy mpikambana ao amin’ny Antsan’ny Fanantenana ny talenta hafa ananany enti-midera an’Andriamanitra, toy ny soradihy.
Hofaranana amin’ny fampisehoana ny zavatra nataon’ny Afa, nandritra ilay fifaninanan-kira natrehiny tamin’ny taon-dasa, kosa ny fotoana. Aorian’ity antsan-kira ity, fantatra fa hitohy any Manakara ny asa fitoriana ataon’ireo tanora.